‘प्रसाद’मा नम्रताको नक्कली कपाल ! « Ramailo छ
‘प्रसाद’मा नम्रताको नक्कली कपाल !
दिनेश राउतले निर्देशन गर्ने फिल्म ‘प्रसाद’को सोमबार काँडाघारीस्थित महिला आश्रममा शुभमुर्हुत गरियो । जसमा विपिन कार्कीको पत्नीको भूमिकामा देखिदैछिन्, नम्रता श्रेष्ठ । मुर्हुतमा नम्रता साबिक झैं लामो कपालमा देखा परिन् । तर महिना दिन अगाडी ‘जायरा’को प्रेसमिटमा ब्याइजकटमा उपस्थित भएकी थिइन् । अर्थात उनको कपाल छोटो थियो ।
‘जायरा’मा मार्सल आर्ट प्लेयरको भूमिका रहेकाले कपाल काटेकी थिइन् । त्यसैले शंकै रहेन, ‘प्रसाद’मा देखिएको उनको कपाल नक्कली हो । किनभने, एक महिनामा प्राकृतिक रुपमा यति कपाल त बढ्दैन नै । त्यसो त कपाल नक्कली हुँदैमा फिल्मलाई खास फरक पर्ने होइन । पर्दामा देख्दा दर्शकलाई सक्कली लागे भइहाल्यो । तर नक्कली कपाल नम्रतालाई कतिको म्याच गर्छ ? हेर्न बाँकी छ ।
‘प्रसाद’ किन पनि प्रतिक्षित छ भने ‘नोभेम्बर रेन’ ‘क्लासिक’ र ‘पर्व’पछि चौथो पटक नम्रता निर्देशक राउतसँग काम गर्दैछिन् । व्यापार औसत रहे पनि ‘क्लासिक’बाट नम्रताले झन्डै एक दर्जन अवार्ड चुमिन । ‘पर्व’ खास फलदायी हुन सकेन । ‘प्रसाद’बाट नम्रताले ‘क्लासिक’ झैं वाहवाही कमाउलिन त ? चासोको साथ हेरिएको छ । सोही कारण नम्रता मात्र होइन, निर्देशन राउतका लागि पनि चुनौतीपूर्ण छ यस फिल्म ।
‘प्रसाद’मा विपिन र नम्रतासँगै निश्चल बस्नेतलाई पनि देख्न पाइने छ । पत्रकार सुशील पौड्यालद्वारा लिखित यस फिल्मले निःसन्तानका कारण पति–पत्निबीच उत्पन्न हुने असमझदारी, अविश्वास र मानसिक द्वन्द्वको कथा भन्ने छ । सुवास थापा फिल्मका निर्माता हुन् ।